I-Best Dental Irrigators | Iyiphi ongayithenga? Imibono, Amanani kanye Ukuqhathanisa
Ama-Irrigators Angcono Kakhulu
I-Waterpik WP 660
I-Waterpik WP 100
I-Oral B Oxyjet
I-Oral B Waterjet
I-Pro HC Premium
I-Waterpik WP 450
I-Waterpik WP 300 Umhambi
I-Philips Sonicare Diamond Clean
I-Oral B PRO 2 2500
I-Oral B PRO 750
Ngabe uyafuna ukuthola imiphumela engcono kakhulu ku-Dental Hygiene? Khohlwa ngokuxubha okujwayelekile noma ukufloss bese uqala ukusebenzisa i-Dental Irrigator. Ziyasebenza, ziphephile, kulula ukuzisebenzisa futhi zingakongela ukuvakasha okuningi kudokotela wamazinyo.
Lapha uzothola ulwazi oluphelele futhi olungachemile mayelana nokuchelela ngomlomo: Ukuqhathanisa, ukuhlaziya, imibono kanye namanani yamamodeli nemikhiqizo engcono kakhulu ukuze ukwazi ukukhetha evumelana nezidingo zakho kanye nesabelomali. Ungalahlekelwa imininingwane futhi uthole ukumamatheka kwakho okuhle kakhulu!
Ukuqhathanisa Okungcono Kakhulu Kwe-Oral Irrigators
Qhathanisa izici ezibaluleke kakhulu zamadeskithophu angcono kakhulu noma amadivaysi angenazintambo lapho uthi nhla ngalawa mathebula amabili.
Ukuqhathanisa Okungcono Kakhulu Kokuchelela Kwethebhulethi
Ukuqhathanisa Okungcono Kakhulu Kwezinkasa Zokuhamba
No. 1 ekuthengisweni
Ibhrendi ehamba phambili
Ukuqhathanisa Nokuchelela Kwamazinyo
I-Oral Irrigators Engcono Kakhulu
Iyini I-Oral Irrigator?
Iyiphi Irrigator Yamazinyo Ongayithenga?
Iyiphi Irrigator Yamazinyo Engcono Kakhulu?
Okwamanje kunamakhulu amamodeli emakethe, kodwa lawa 10 best oral irrigators (ideskithophu nekhompyutha ephathekayo) kanye nezintandokazi zabasebenzisi baseSpain:
I-Waterpik WP-100 Ultra
I-Waterpik WP-100 - Umkhiqizo we ...
10 Amazinga Wokucindezela afika ku-100 Psi
7 Amakhanda Ahlanganisiwe
Izimila Ezikhethekile Zomlomo, I-Orthodontics, njll.
Ithiphu ejikelezayo engu-360 degree
650 ml ichibi
Nakuba kungeyona imodeli yenkampani ephezulu kakhulu, iWP-100 iyona i-irrigator yamazinyo ethengiswa kakhulu ezweni lakithi iminyaka.
Le hydropulsor ingeyomkhiqizo ohamba phambili emhlabeni ekuhlanzekeni komlomo ngaphezulu kunconywa odokotela bamazinyo, inophawu lwe I-ADA (American Dental Association) kanye nokusebenza kwayo kube kufakazelwe ngokwesayensi.
Ukucaciswa kwakho kuyahlangabezana izidingo zanoma yimuphi umsebenzisi, ikakhulukazi njengoba ihlanganisa imibhobho yazo zonke izidingo.
Ukuhlaziywa kwe-Waterpik WP 100
I-Waterpik WP-660 Aquarius
I-Waterpik Ultra Water Irrigator ...
Ukuhlanza kanye nomsebenzi we-gum massage
El I-WP-660 isincomo sethu kulabo abafuna i-irrigator yekhwalithi futhi iphelele kakhulu ngentengo elungisiwe. Isebangeni lentengo elimaphakathi, isuka kumkhiqizo ohamba phambili futhi ukucaciswa kwayo kanye nemishini kuhle kakhulu kunoma yimuphi umsebenzisi.
Le hydropulsor ine amazinga amandla ahlukahlukene, imibhobho yazo zonke izinhlobo zezidingo kanye nobuchwepheshe obuhle kakhulu benkampani enamalungelo obunikazi amaningi emakethe.
Ukuhlaziywa kwe-Waterpik WP 660
I-Oral-B Oxyjet Irrigator Yamazinyo...
5 Amazinga Wokucindezela afika ku-51 Psi
4 Amakhanda Ahlanganisiwe
600 ml ichibi
I-Filtro de Aire
I-Wall noma i-Table Mount
Icala lezinsuku ezingama-30
UBraun uzakhele igama elihle emhlabeni wokuhlanzeka kwamazinyo kanye abanisela babo nabo baphakathi kwezingcono kakhulu emakethe.
El Oxyjet by braun ingumdayisi ongcono kakhulu ogqama ngokuba nesistimu yokuhlanza leyo ihlanganisa indiza yamanzi enomfutho nomoya ohlanzekile, okwenza iqembu a ukukhetha okuhle kakhulu kubantu abanezinsini ezibucayi.
Ngokuvamile, iyithuluzi eliphelele kakhulu futhi abasebenzisi banelisekile ngemiphumela eyinikezayo. Kuyafaneleka ukubalula lokho ingcindezi enkulu iphansi kunemishini eminingi, kodwa ku-Oral B basitshele ukuthi kuyafaneleka ngokwezifundo zabo.
I-Aquapik 100 - I-irrigator yamazinyo ...
10 Amazinga Wokucindezela afika ku-130 Psi
Ukuvala shaqa okuzenzakalelayo
Iwaranti yeminyaka emibili
Uma unesabelomali esiqinile, asikho isidingo sokuthi uyeke ukuchelela kahle ngomlomo njengoba kunezinketho ezimbalwa emakethe izintengo zazo zifinyeleleka kuzo zonke izabelomali. Sifuna ukugqamisa le modeli abanayo izinkomba ezinhle kakhulu zabasebenzisi abaye bazama futhi inikeza ini Iwaranti yeminyaka emibili.
I-Aquapik evela kumkhiqizo we-Oralteck Usa I-ADA iqinisekisiwe, inezincazelo ezinhle kakhulu, okokusebenza okuphelele kanye a intengo elungisiwe ngempela mayelana nomncintiswano.
Ukuhlaziywa kwe-Aquapik 100
I-Pro-HC Water System
I-Irrigator Yomlomo noma Yamazinyo ...
5 Amazinga Wokucindezela afika ku-75 Psi
11 Amakhanda Ahlanganisiwe
1100 ml ichibi
Enye i-hydropropeller yezomnotho egqama ngaphezu kwayo yonke enye idivayisi yomkhiqizo I-Pro-HC, ikakhulukazi UHLELO LWAMANZI I-PREMIUM, esibuye sayihlaziya kuwebhusayithi yethu.
Kungumkhiqizo ukuthi Igqama ngaphezu kwakho konke enanini lamakhanda afakiwe kanye nokusebenza kwayo okuyisisekelo kodwa okuphumelelayo nokulula. Ngaphezu kokuthuthukisa inhlanzeko yomlomo, inamakhanda amabili ukuchelela emakhaleni.
Ukuhlaziywa kwe-Premium yesistimu yamanzi
I-Waterpik WP-450 engenantambo
I-Waterpik 450- I-Oral Irrigator ...
2 Amazinga Wokucindezela afika ku-75 Psi
210 ml ichibi
Ngaphandle kwentengo yayo engaphezu kwesilinganiso, i-Wp-450 Ingenye yama-hydropulsors aphathwayo athengiswa kakhulu ezweni lakithi. Ukucaciswa kwayo okuphelele nolwazi lomkhiqizo kwenza kube ukubheja okuphephile.
Ivelele ngaphezu kwesilinganiso ku izinga elingcono lezinto zokwakha, umthamo omkhulu wethangi, ukuzimela okwengeziwe kwebhethri futhi ngokuthi kuhlanganisa imibhobho ekhethekile okokufaka kanye ne-orthodontics.
Ukuhlaziywa kwe-Waterpik 450
I-Panasonic EW1211W845 Irrigator ...
Ingcindezi ifika ku-85 Psi kanye nama-pulses angu-1400 ngomzuzu
Izindlela ezi-3 (UMOYA NGOKUJWAYELEKILE, UMOYA OKUTHOBILE, I-JET)
2 Amakhanda Ahlanganisiwe
130 ml ichibi
Okuhle kakhulu I-Panasonic irrigators Zingamamodeli ebhethri futhi lesi sichelela somlomo esingenazintambo sikhona enye yamadivayisi anentengo engcono kakhulu yekhwalithi emakethe. Lokhu kubeke njenge omunye wabathengisi abahamba phambili ezweni lakithi, ngaphezu kwe-waterpik.
Kuyidivayisi ene amandla amahle kanye nezindlela ezintathu zokusebenza ezivumela ukuthola imiphumela emihle kakhulu ekuhlanzekeni komlomo. Okuwukuphela kokungalungi uma kuqhathaniswa namanye amamodeli amandla aphansi ethangi, okudinga ukuthi ligcwaliswe izikhathi eziningi.
Bona amanye ama-Panasonic dental irrigators
I-Waterpik WP-300 Traveler
AMANZI PICK - WATER PICK WP300 ...
3 Amazinga Wokucindezela afika ku-80 Psi
450 ml ichibi imizuzwana engu-60
Njengoba igama layo liphakamisa, i-WP 300 iyimodeli ye ideskithophu enomklamo nezici ezenza kube lula ukuyiyisa nomaphi lapho sihamba khona.
Ngoba lokhu banayo yehlisa ubukhulu bayo futhi bayiklame ngendlela yokuthi ingagcinwa esikhwameni esincane sokuhamba esifakiwe.
Futhi inayo ukuhambisana negridi yamandla yamazwe ahlukahlukene, okwenza kube enye indlela ephathekayo ephathekayo kumamodeli webhethri.
I-Waterpik Traveller Analysis
I-Oral-B 2 koku-1
I-Oral-B PRO 3000 - Isiteshi ...
Kepha I-2-in-1 yokuchelela ngomlomo nge-irrigator nebhulashi wamazinyo umholi ongenambangi yile brand hydropulsor I-Oral-B. Ekhithi efanayo sine- ibhrashi yamazinyo kagesi ehamba phambili kanye ne-hydropulsor yokwenza ukuchelela ngomlomo ngemva kokuxubha ngakunye.
Futhi asifuni ukukhohlwa enye imodeli engu-2-in-1 esiyihlaziyile, i I-Waterpik WP900. Yize ingadumile kangako kubasebenzisi, ikhiqizwa yinkampani enama-opharetha wamazinyo angcono kakhulu emakethe.
Uma ungakabi naso isixubho sikagesi, iyona ndlela engcono kakhulu yokuyikhetha thola ukuhlanzeka okuphelele kwamazinyo ekhaya.
I-Sowash: I-Faucet Irrigator ngaphandle kweMoto
I-SOWASH Dental Irrigator...
Uyafuna i-booster engeyona eyenjini engabangi umsindo futhi engasebenzisi amandla kagesi? I-Sowash inemibono ecishe ibe yi-100 kanye nesilinganiso esimaphakathi 4.2 ngaphezulu kuka-5 ngabasebenzisi abayithengile.
Intengo yayo iphansi kunamanye amamodeli axhunywe empompini futhi ngaphezu kwawo ezithengisa kakhulu futhi ezaziswa kakhulu.
Okwamanje kunamakhulu amamodeli ezinhlobo ezahlukene ngokucaciswa okuhlukene, imiklamo namanani. Lokhu kwenza kube nzima ukukhetha i-irrigator enhle yomlomo ngayinye.
Into ebaluleke kakhulu ku-hydropulsor ukuthi isebenze kahle ekuqedeni amagciwane kanye nemfucumfucu yokudla engase ihlale emgodini womlomo ngemva kokuxubha.
Kusukela kulesi sisekelo, kukhona ukucaciswa okuthile okubaluleke kakhulu, njengamasethingi okucindezela noma umthamo wethangi, nezinye ezingabalulekile kangako njengedizayini noma izinga lomsindo.
Umhlahlandlela Wokukhetha I-Irrigator Yomlomo Engcono Kakhulu
Lezi yizo izici ezibalulekile okufanele zicatshangelwe ukukukhethela i-irrigator engcono kakhulu:
Ekuqaleni, okuvame kakhulu ukukhetha imodeli yedeskithophu nge futha kagesi, kodwa kukhona abantu abakhetha a I-irrigator yamazinyo ephathekayo ukuyithatha ohambweni lwakho noma eyodwa engenanjini.
I-Pressure kanye ne-Dental Shower Modes
Esinye sezici eziyinhloko ezisinikeza ukuhlanza okulungile yi- amandla kanye nekhwalithi yejethi yamanzi. Isincomo sethu ukuthi ukhethe amamodeli anamandla aphakeme kakhulu kodwa ahlale elungiseka, ukuze sikwazi ukuyilungisa ngokwezidingo zethu. Amandla aphezulu kodwa angalawulwa angacasula kwabanye abantu.
Ngaphandle kwamandla ahlukene, futhi kukhona amajethi amanzi ahlukene nemishini nge kungenzeka ukukhetha izindlela ezahlukahlukene zokusebenzisa. Kukhona amajethi ane amabhithi amaningi ngomzuzu, amajethi ahambayo kuhlanganiswe namabhamuza omoya ngisho squirt imodi ye-massage.
Kwamanye amamodeli ubukhulu bethangi Akwanele ukwenza ukuhlanza okuphelele, ngakho-ke kuzodingeka ukuthi uphinde ugcwalise ngesikhathi esithile. Lokhu ekuqaleni kubonakala kungabalulekile kodwa ngokuhamba kwesikhathi kungacasula, ikakhulukazi uma incane kakhulu futhi udinga ukuyigcwalisa izikhathi eziningana ngokusetshenziswa ngakunye.
Ngokungeziwe emilonyeni evamile yamazinyo okufakelwa anempilo, kukhona imilomo ethile yabasebenzisi abasebenzisa i-orthodontics noma abafakelwa amazinyo. Uma sifuna ukuthola imiphumela emihle, sikweluleka ukuthi ukucabangele lokhu uma ukhetha inkasa engcono kakhulu kuwe.
Kuyafaneleka futhi ukusho ukuthi kukhona amamodeli anama-nozzles angashintshi futhi ane Izingcezu zomlomo ezijikelezayo futhi ezivumela ukufinyelela okulula kuzo zonke izindawo zomlomo.
Ukutholakala Kwezingxenye Ezisele kanye / noma Izesekeli
Ngaphambi kokukhetha i-hydropulsor kufanele uqiniseke ukuthi okungenani imibhobho yokushintsha iyatholakala ozoyidinga. Lawa mabhomu anempilo ewusizo yezinyanga ezimbalwa futhi kudingekile ukuba esikhundleni sazo, njengesixubho.
Ukuthenga imodeli ezinkampanini ezaziwayo kuqinisekisa ukuthi izingxenye ezisele zizoba njalo etholakala isikhathi eside.
Izinga Lomsindo kanye Nomklamo
Nakuba ziyizici ukuthi ungathonyi ngokuqondile ukusebenza Ku-oral irrigator, kunabantu ababeka ukubaluleka okukhulu kuzo zombili izici. Umsindo awunakugwenywa kuma-irrigators anamandla, kodwa kuyiqiniso lokho amanye amagajethi asuka enhliziyweni kakhulu kunamanye. Uma okufunayo ukuthula okuphelele ngesikhathi sokunisela ngomlomo kuzodingeka ukhethe enye yamamodeli ngaphandle kwemoto ezixhunywe empompini.
Izinhlobonhlobo zemiklamo zinkulu, zikwazi ukukhetha imibala ehlukene kanye nosayizi abahlukene. Kukhona nama-thruster ebhentshi ahlangene aklanyelwe ukuhamba, njenge i-waterpik wp-300 isihambi. Ezinye izinto zikagesi zingalengiswa odongeni, into engabongwa ezindaweni ezincane.
Intengo Nesiqinisekiso Sokuchelela Kwamazinyo
Ukusebenza kahle kwabacheleli kanye nokwaneliseka okujwayelekile kwabasebenzisi kusho ukuthi eminyakeni yamuva nje isidingo sinyukile. Njengoba isidingo sikhuphuka, abakhiqizi abasha abangenakubalwa sebevele bangena emakethe amakhophi yemikhiqizo ehamba phambili. Le mikhiqizo abanalo ulwazi noma iziqinisekiso ukusebenza kahle okufana ne-Waterpik, egunyazwe i-ADA futhi isilokhu isungula futhi inika ilungelo lobunikazi ubuchwepheshe bayo iminyaka engaphezu kwengu-30.
Kuyacaca ukuthi akuwona wonke umuntu ongakwazi ukukhokhela amamodeli angcono kakhulu emakethe, kodwa hay Ama-Irrigators Amazinyo Ashibhile enikeza imiphumela emihle kakhulu. Kuwebhusayithi yethu ungathola ezingaphezu kweyodwa ezinekhwalithi enhle nemibono emihle kakhulu yabasebenzisi.
Umbono wabanye abasebenzisi abaye bazama i-irrigator yomlomo iyinkomba enhle yokwazi ukuthi yimiphi imiphumela enikezayo. Wonke umuntu uhlukile, kodwa i-hydropulsor enezilinganiso eziningi futhi ethola amamaki esilinganiso esiphezulu mancane amathuba okuba isidumaze.
Bona ama-Oral Irrigators angcono kakhulu
Izinhlobo Ezinhle Kakhulu Zokuchelela Ngomlomo
Isinyathelo esisodwa ngaphezu kwakho konke yi-Waterpik, umholi womhlaba emishinini yokuchelela amazinyo nge inqwaba yamalungelo obunikazi kanye nezifundo zesayensi abasekela imikhiqizo yabo. Yize ingenye yabathengisi abahamba phambili, akuyona yodwa enama-booster amahle.
Chofoza kuzo ukuze ufinyelele lonke ulwazi mayelana nemikhiqizo evelele kakhulu namamodeli awo angcono kakhulu:
Yini I-Dental Irrigator?
I-irrigator ngomlomo noma ishawa yamazinyo imane iyithuluzi elisebenzisa i- ijethi eliphehlayo lamanzi acindezelwe ukususa imfucumfucu yokudla kanye uqweqwe lwegciwane que bamelana nokuxubha nsuku zonke.
Le ndlela yaziwa njenge ukuchelela ngomlomo futhi uthole ukufinyelela ezindaweni ezinzima yomgodi womlomo, njengezindawo eziphakathi kwamazinyo, i-gum line noma iphakethe le-periodontal.
Indlela yokusebenzisa i-Dental Irrigator
Bonke abachelela banesistimu efanayo futhi ngokuyisisekelo bakhiwe a ithangi lamanzi, ipompo kanye nobhobho lapho ukufaka ijethi yokucindezela.
Amanye amamodeli afaka ukuthuthukiswa okufana imibhobho ehlukene, amazinga okucindezela ahlukahlukene alungisekayo, ngisho nenketho yokubhucungwa noma yokucwenga izinyo. Phakathi kwemibhobho ehlukene singathola ethize ngayo i-orthodontics, ngenxa okufakelwa futhi ngisho ulimi oluthile.
Imibuzo Evame Ukubuzwa Mayelana Ne-Irrigator Yomlomo
Ukungabaza okuvamile mayelana nama-hydropulsors
Kunini lapho kudingekile ukusebenzisa i-hydropulsor?
Zifanele noma ubani abafuna ukuthola ukuhlanzeka kwamazinyo okungcono emakhaya abo, ngaleyo ndlela basize ukuvimbela izifo zomlomo. Awudingi ukuba nenkinga ukuze uwasebenzise, futhi kukhona ngisho namamodeli wezingane, kodwa kufanele isetshenziswe njalo kulezi zimo:
Iziguli ezinezinsimbi ezenza ukuhlanza kube nzima
Iziguli zokufakelwa amazinyo
Iziguli ezine-gingivitis noma i-periodontitis
Kusetshenziswa inkasa yomlomo kangaki ngosuku?
Ingasetshenziswa ngemva kokuxubha zonke izinyo, inqobo nje uma kungaphansi kwemizuzu emi-5 njalo ngamahora amabili
Ingabe I-Tap Water Iyasebenza?
Ama-Irrigators sebenza ngamanzi kampompi avamile, akudingekile ukusebenzisa amanzi amaminerali noma ukusebenzisa noma yiziphi izithasiselo.
Ingabe abantu abaningi bangayisebenzisa?
I-Las Imibhobho iyashintshashintsha futhi ngokuvamile iza ngemibala ehlukene, ngakho-ke i-hydropulsor eyodwa ingasetshenziswa amalungu omndeni ahlukene.
Ingabe ingasetshenziswa nokugeza umlomo?
Nakuba kungenasidingo, i-mouthwash ingafakwa ngokwesilinganiso esiphezulu esingu-1:1. Akunconywa ukusebenzisa ezinye izithasiselo ezifana ne-bicarbonate noma i-chlorine.
Izinhlobo Zokuchelela Ngomlomo
Okwamanje singathenga izinhlobo ezintathu wemishini yokuchelela ngomlomo:
I-tabletop Irrigator: Udinga ukuwaxhuma kunethiwekhi kagesi futhi yiwona avame kakhulu. Njengomthetho ojwayelekile, yilabo abanikelayo ukusebenza okungcono, izindlela eziningi zokusebenzisa kanye nenani lamabhomu. Bangaba amamodeli elula noma ezimbili-in-one zokuchelela, nazo ezihlanganisa i isixubho sikagesi.
Ama-Irrigators Aphathekayo: Amamodeli angenawaya lawo hlanganisa ibhethri elishajekayo. Lawa madivayisi ayindlela engcono kakhulu uma ufuna ukuyisusa ekhaya noma unesikhala esincane endlini yakho yokugezela.
Faucet i-irrigator yamazinyo ngaphandle kwe-motor: Lolu hlobo lwemishini athengiswa kancane, kodwa banezinzuzo ezithile. Sekwanele baxhume ngqo empompini futhi njengoba bengenawo injini, awadingi amandla futhi abawubangi umsindo.
Ungathenga kuphi I-Oral Irrigator?
Ukuthi ukhetha le modeli noma yimuphi omunye Isincomo sethu ukuthi uyithenge ku-inthanethi e-Amazon. Unayo Imikhiqizo eminingi, izintengo ezingcono kakhulu ze-inthanethi, ukuthunyelwa okushibhile nokusheshayo futhi ungabuyisela okuthengile ngaphandle kwezinkinga. Sesisebenze nabo iminyaka futhi asibanga nankinga.
I-Oral Irrigators Ethengiswa Kakhulu
Sikutshelile ukuthi yimaphi amamodeli angcono kakhulu emakethe, kodwa le mikhiqizo ayihlali ihambisana nabathengisi abahamba phambili. Ngezansi ungabona a uhlu olubuyekezwa ngokuzenzakalelayo ngezinisela zamazinyo ezithengiswa kakhulu okwamanje:
I-Portable Oral Irrigator ... Bona izici 11.106Izibuyekezo ezingu- XNUMX Buka isivumelwano
I-Oral-B Oxyjet Irrigator Yamazinyo... Bona izici 20.761Izibuyekezo ezingu- XNUMX Buka isivumelwano
I-Apiker Dental Irrigator ... Bona izici 10.840Izibuyekezo ezingu- XNUMX Buka isivumelwano
I-Portable Oral Irrigator ... Bona izici 5.344Izibuyekezo ezingu- XNUMX Buka isivumelwano
I-Oral Irrigators-TUREWELL... Bona izici 8.364Izibuyekezo ezingu- XNUMX Buka isivumelwano
I-Professional Dental Irrigator ... Bona izici 3.930Izibuyekezo ezingu- XNUMX Buka isivumelwano
Okuhle kakhulu	I-Portable Oral Irrigator ...
Ikhwalithi yamanani	I-Oral-B Oxyjet Irrigator Yamazinyo...
Intandokazi yethu	I-Apiker Dental Irrigator ...
I-Portable Oral Irrigator ...
I-Professional Dental Irrigator ...
11.106Izibuyekezo ezingu- XNUMX
20.761Izibuyekezo ezingu- XNUMX
10.840Izibuyekezo ezingu- XNUMX
5.344Izibuyekezo ezingu- XNUMX
8.364Izibuyekezo ezingu- XNUMX
3.930Izibuyekezo ezingu- XNUMX
Amazwana angu-4 kokuthi «»
05/08/2019 ngo-00: 50
Ngingayithenga kuphi ipulaki kazibuthe yokunisela kwami ​​i-waterpik ????
07/08/2019 ngo-09: 03
Sawubona Maria. Awusho imodeli okufanele ikusize. Noma kunjalo, kuwebhu uyakwazi ukufinyelela idatha yesevisi yezobuchwepheshe yomkhiqizo waseSpain.
17/12/2019 ngo-11: 14
Isihloko esiphelele kakhulu !! Baze basho ne-irrigator yamazinyo yalabo abaxhuma empompini 🙂 (Ngiyabathanda). Ngisebenzise i-so wash futhi iqiniso liwukuthi izinga ... njalo kusukela amanzi aphuma ngokusebenzisa uxhumano empompini phakathi kwezinye izinto. Kulabo kini abathanda ukuchelela kwamazinyo kampompi kakhulu, kunezinye izinhlobo ezingcono kune-So Wash, ezifana no-Kler ..., Ban ...
Ukuze ujabulele ukuchelela futhi ungakhohlwa ukuya kudokotela wamazinyo ngezikhathi ezithile ukuthi into eyodwa ayisusi enye 🙂
17/12/2019 ngo-14: 32
Siyabonga kakhulu u-Ana, silwela ukudala okuqukethwe okuyinhloso kanye nekhwalithi. Sanibonani
Unomthwalo wemfanelo wedatha: AB Internet
I-Irrigators Black Friday
Ukunisela kwamazinyo 2022 - Inqubomgomo yobumfihlo - Imininingwane mayelana namakhukhi